'शेखर गोल्छा र चन्द्र ढकाल महासंघको आवश्यकता हो, मिलेर काम गर्न आतुर छु'| Corporate Nepal
मंसिर ९, २०७७ मंगलबार १२:५५
रामचन्द्र संघई, उपाध्यक्ष उम्मेदवार, एसोसियट समुह
३६ वर्ष पहिले कपडा आयात गरेर व्यवसायीक यात्रा थालेको रामचन्द्र संघई यतिबेला नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको एसोसियट तर्फ उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार छन् । स्थापित व्यवसायीक घराना त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक समेत रहेका संघाई विगत १५ वर्षेखि महासंघको कार्यसमिति थिए । पदाधिकारीमा पहिलो पटक उम्मेदवार बनेको छु, एसोसियट तर्फ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुँ । सबैबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाईरहेको छु । ९ सय २३ जना एसोसियट मतदाता छन् ।
‘म ३६ वर्षदेखि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न छु । १५ वर्षदेखि महासंघमा कार्य समिति सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छु । मसँग उद्योग चलाएको र महासंघमा काम गरेको अनुभव छ । रोजगारदाता र मजदुरको संघर्ष, समन्वय सहकार्यको लामो अनुभव प्रत्यक्ष आफैंले भोगेको र समाधान पनि गरेको छु ।’, संघाईले भने ।
किन उम्मेदवार ?
म विगत १५ वर्षदेखि महासंघको कार्य समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा छु । थप योगदान गरौं भनेर पदाधिकारीमा पहिलो पटक उम्मेदवार बनेको हुँ । म उम्मेदवार बनेको एसोसियट तर्फ ९ सय २३ मतदाता छन् । सबैबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाईरहेको छु । मसँग उद्योग चलाएको र महासंघमा काम गरेको अनुभव छ । रोजगारदाता र मजदुरको संघर्ष, समन्वय सहकार्यको लामो अनुभव प्रत्यक्ष आफैंले भोगेको र समाधान पनि गरेको छु ।
म उद्योगदेखि व्यापार हुँदै सेवा क्षेत्रको व्यवसायमा पनि संलग्न छु । आयातदेखि निर्यातसम्मको व्यवसायमा सफलता पाईरहेको छु । हामी ठूलो मात्रामा धागो, दाल र खाने तेल, चियाको निर्यातकर्ता पनि हौं । गत वर्षमा डलरमा सबै भन्दा धेरै धागो निर्यात गरेर सीआइपी सम्मान पनि पाएको थिएँ । महासंघमा बसेर देशका उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोँच हो । मैले आफ्नै उद्योगमा श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि राम्रो काम गर्दै आईरहेकाले महासंघमा बसेर त्यसका लागि थप योगदान दिने योजना छ ।
चन्द्र ढकाल नै किन ?
चन्द्र ढकाललाई नचिन्ने कोहि व्यवसायी छैनन् । ढकाल सरल स्वभावका सफल र इमानदार उद्यमी व्यवसायी हुन् । ढकालको टिमबाट उम्मेदवार बन्दा केहि न केहि काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । सरकारसँग पनि उद्यमी व्यवसायीको मुद्धा राम्रोसँग डिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाई पनि हो । उहाँ अहिले एसोसियट उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँसँग रोजगारदाता परिषदको अनुभव पनि छ । उहाँबाट मैले केहि सिक्ने अपेक्षा पनि गरेको छु । शेखर गोल्छा पनि यहि क्लष्टरबाट आउनु भएको हो, काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने निष्कर्ष छ । सफल उद्यमीसँग मिलेर काम गर्दा व्यवसायीको मनोबल बढाउन सकिन्छ, लगानीको वातावरणमा थप सुधार गर्न सकिन्छ भनेर ढकालको समुह रोजेको हुँ ।
नेतृत्वको चाह पनि
मतदाताहरुमा आफुले भोट हालेको व्यक्तिले महासंघको मुल नेतृत्व गरोस् भन्ने शुभेक्षा रहन्छ । जुन कुरा स्वभाविक पनि हो । यसपाली एसोसियटको उपाध्यक्ष जिताउनु भयो भने म उहाँहरुको चाहाना पुरा गर्नेछु ।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आकर्षक र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत औद्योगिक श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि महत्वपूर्ण संस्थाको रुपमा विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर विद्यमान सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा श्रमिकहरुले प्राप्त गर्ने प्रतिफल एवम् अन्य निर्धारित कार्ययोजनाहरु पुनरावलोकनको आवश्यकता देख्दछु ।
चुनावी माहोल र एजेण्डा
म चुनावी माहोलबाट उत्साहित छु । म निर्वाचन जित्छु भन्नेमा ढुक्क छु । रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुधार गर्ने मेरो मुल एजेण्डा हो । यसले नै लगानीको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्छ । ५० अर्बको राहत प्याकेज कार्यान्वयन अर्काे एजेण्डा हो । निर्यात बढाउन पनि भूमिका खेल्छु । त्यस बाहेक उत्पादन लागत घटाउनका लागि पनि योगदान दिने हो । त्यसका लागि श्रम सम्बन्धको व्यवस्थापन, सस्तो विजुलीको व्यवस्था, न्युन दरको बैंक ब्याजदर जस्ता कुराले भूमिका खेल्छन् । यी विषयहरु मेरो प्राथमिकतामा हुनेछन् ।
कोरोना महामरीले निर्यातजन्य उद्योगको अवस्था नाजुक बनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या ल्याएको छ । कतिपय मुलुकहरु पुनः लकडाउनको अवस्थामा पुगेका छन् । भारतमै पनि कतिपय प्रदेशहरुमा पुनः लकडाउन भैरहेको छ । हामीले पनि कोरोना महामारीकै बिच पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि भूमिका खेल्नेछौं ।
छिमेकीको जोखिम र अवसर
हाम्रो छिमेकमा तिब्र विकास भैरहेका दुई ठुला अर्थतन्त्र छन् । उनीहरुको तुलनामा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार साह्रै सानो छ । हामीले निर्यातका लागि प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । चीन र भारतमा रहेको विशाल बजारको उपयोग गर्ने तयारी हामीले गर्नुपर्छ ।
एफडीआई कसरी ?
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पहिले हाम्रै देशभित्रका उद्यमी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जितेर विदेशी लगानी भित्र्याउने हो । हामी आफैं पनि त्यसमा योगदान गर्न तयार छौं । भारत र चीनको बजारलाई उपयोग गर्न पनि नेपाललाई आकर्षक वैदेशिक लगानी गन्तव्य बनाउनुपर्छ ।
भोट किन ?
मलाई अमूल्य भोट दिएर, विजयी गराउनुस्, तपाईहरुको मतको कदर गर्नेछु । उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाएर लगानीको वातावरण थप मजबुत बनाउन भूमिका खेल्नेछु ।
र, त्रिवेणी ग्रुप......
म त्रिवेणी ग्रुपको निर्देश हुँ । हामीले सबै खाले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेका छौं । सिमेन्ट, कपडा, धागो, चिया, तेल, एलपी ग्यास, अक्सिजन ग्यासमा लगानी गरेका छौं । त्यस बाहेक सेवा मुलक क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छौं । आज त्रिवेणी ग्रुपमा १६ हजार नेपालीले रोजगारी पाएका छन् ।